Sare & Cunto; Sidee loo Aqoonsi karaa loona Dagaalamaa Spam Ghat Isticmaalka Google
Spam wuxuu dhacaa marka xogta la helo aan la helin. Nooca spamkan ah waa laba qaybood. Spam hilibka iyo spam Ghost - gafas ray ban aviator cristal rosa. Ka takhalusidda taraafikada Ghost waa feejignaan, laakiin waxaad u baahan tahay inaad qeexdo nooca nacfiyada noocan oo kale ah, ugu horeyn iyo ugu horreynba.
Gawaarida ayaa ah nooca spam ee dhab ahaantii soo booqda goobtaada adigoo u diraya bootyo si weyn u jaahwareeriya xeerarka sida kuwa robots.txt. Marka ay ka baxaan goobta, raadsashada booqasho sharci ah ee xogta Google Analytics ayaa laga tegayaa, laakiin nasiib daro, waa been abuur. Way adagtahay in la aqoonsado sababtoo ah waxay ka dhuuntaan dib-u-diriddooda si ay u helaan bogagyo dhab ah iyo URL la mid ah.
Frank Abagnale, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Semt , wuxuu la wadaagayaa waayo-aragnimadiisa ku saabsan sida loola tacaalayo spam spam si guul leh.
Dabayshu waa spam ugu caamsan. Si ka duwan kuwa gurguurta, ma laha wax xiriir ah oo ku saabsan boggaaga, halkii, waxay u dixiri doonaan server-yada Google Analytics iyada oo loo marayo marinka Trojan iyada oo loo marayo xeerarka raadinta Google Analytics. Waxay ku soo dhex galaan codsiyadaada iyaga oo ka soo iibsanaya dhinac saddexaad ama shuruucda dabagalka ee dhicisoobay (UA-XXXXXX-Y). Maadaama aysan haysanin goobtaada, waxay isticmaalaan Qiyaasaha Qiyaasaha si loo bedelo xogta Google Analytics.
Dadka badankood waxay ku weydiiyaan sababta aad u joojin lahayd spam galka. Spam waxay leedahay saameyn ba'an oo ku dhaca falanqaynta bogagga internetka ee dadka isticmaala. Waxay hoos u dhigaan xawaaraha internetka ee isticmaalaha iyada oo la kordhinayo culeyska serverka. Inkastoo aysan faragelinin Mashiinka Mashiinka Raadinta, xogta la isku rogay ma muujineyso akhristaha dhabta ah ee internetka. Ugu dambeyntii, Your Search Engine Optimization ayaa lagu saameeyaa in qiimeyntaada raadintaada ay hoos u dhacdo sababtoo ah go'aan qaadasho aan habooneyn oo xukumin go'aano
Inkasta oo ay taasi jirto, waxyeelo ku wajahan jaangooyooyinka muhiimka ah sida dadaal, kulanno iyo qiyaasta celceliska, kuwaas oo xogta loo wareejiyo dhinacyo ka soo horjeeda, kama dhageesto Search Engine Research Research Page (SERP). Si fudud, inkastoo Google Analytics waa adeeg falanqeyn oo caan ah, maahan goob kasta oo isticmaala Google Analytics. Tani waxay sharraxaysaa sababta wax xog ah oo ka imanaysa falanqeeyayaasha Google ma saameyn doonaan qiimeynta goobta Google.
Waxaa jira siyaabo aad ku macaamili karto spam rahmadda iyadoo la adeegsanayo Google Analytics. Siyaabahaan waxay ku lug leeyihiin talaabooyinka isticmaala shaandho hal mar ah oo ka soo horjeeda spam galka..Waxaa aad loogu talinayaa sababtoo ah user ayaa kaliya oo cusbooneysiiya oo ku daraya code cusub. Haddii kale, dayactir yar ayaa laga rabaa isticmaalaha. Ugu dambeyntii, aqoonsashada qalabka martida loo shakiyo ee kufsiga si aad u ilaaliso spam galka ka geli galka xogta Google Analytics
Ugu horeyn , u tag Google Analytics (halka aad ku aragtid taraafikada bogga ) iyo aqoonsi tabaha warbixinta. Gudaha gacanta bidix, raadso 'Dhageystayaal' oo guji. Ku wareeji guddiga gacanta bidix oo aqoonsi 'Teknoloji' oo guji. Kordhin tiknoolajiyada oo dooro 'Network'. Warbixinta Aaladda ayaa soo baxaysa oo kor ku yaal, riix 'Hostname'. Taas ka dib, liiska marti-geliyeyaasha ayaa soo bixi doona oo ay ku jiraan kuwa ay isticmaalaan spam. Waxaad markaa liisgareyn kartaa marti-geliyeyaasha saxda ah. Tusaale ahaan, Yourmaindomain.com ama seosydney.com
Labaad , oo ay ku jiraan dhamaan marti-geliyeyaasha oo abuuraan sharaxaad joogto ah. Tusaale ahaan, seosydney \_ .com | yourmaindomain.com
Seddexaad , samee shaandhada caadada ah. Guji 'Tababar' tab ee dhinaca bidixda midigta hoose (hubi inaad aragto iyada oo aan lahayn filtarrada). Riix 'Dhammaan Filters' ka dibna riix '+ Fadlan Fiiri'. Under 'Type nooca' click 'Custom'. Tani waxay abuureysaa filter cusub. Abuur magaca Magaca. Xulo inaad ku darto 'Hostname' ka dib markaad hubiso 'Ku dar' xumbo '. Ku calaamadee ereygaaga caadiga ah sanduuqa 'Filter Pattern'
Ugu dambeyntii , tag Fillers Filo oo dooro 'Master' kadibna "Ku dar" aragtida la soo xulay. Xulo 'Badbaadi' kuna dabaq natiijooyinkaaga
Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ku talisaa in mar kasta oo aad ku daro koodhka raadinta adeeg kasta, waxaa ugu fiican in lagu daro koodhka dhammaadka shaandhada. Tani waxay gacan ka geysatey in ay ka hortagto dhacdooyinka mustaqbalka ee spam spoof.